Nchọpụta BLG Mind na-etinye nkwado nkwado na ngosipụta | Bromley, Lewisham & Greenwich Uche
Nchọpụta nke BLG Mind na-etinye nkwado nkwado na ngosipụta
Ihe na November 27, 2020 site BLG Uche Udi: General
Nnyocha n'ime nkwado ahụike ahụike ọgụgụ isi nke BLG Mind na-eduzi nwere ike imeziwanye ọrụ ndị na-amụ nwa na-agafe n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ London.
Na mbido afọ a, ndị NHS England nyere ọrụ BLG Mind ka ha mee nyocha gburugburu nghọta ihe mgbochi iji nweta nkwado ahụike ọgụgụ isi n'oge oge ọhụụ (afọ ime na ọnwa ndị na-esochi ọmụmụ).
Nnyocha a lekwasịrị anya na mpaghara isii nke ndịda London ọwụwa anyanwụ: Bexley, Bromley, Greenwich, Lambeth, Lewisham na Southwark.
BLG Mind nyere ndị ndụmọdụ ọrụ ka ha rụọ ọrụ ubi na mpaghara ọ bụla. Na ngụkọta, ndị ọkachamara ahụ tinyere ihe karịrị ụmụ nwanyị 400. A na-enyocha ihe nchoputa ugbu a iji mata ụdị ọnọdụ ọ bụla ma gosipụta ma enwere ihe mgbochi ụfọdụ metụtara ụmụ nwanyị na-enweta nkwado ahụike ọgụgụ isi ọ bụla.
Charlotte Fletcher, Isi nke Development for BLG Mind na onye ndu ọrụ kwuru, sị: “ryrụ nyocha a n’oge ọrịa zuru ụwa ọnụ abụwo ihe ịma aka nye onye ọ bụla metụtara, yana ịkọwa ụmụ nwanyị isonye na ọrụ ahụ mgbe emechiri ọtụtụ ihe ma ndị ọrụ dị mkpa nwere dị obere dị ntakịrị agbakwunyela na nsogbu ahụ.
“Otu osila dị, obi dị m ụtọ na anyị nwere akụkọ isii ga-enyere anyị aka ịkọ akụkọ maka South East London niile.
“Echere m na ndị ndụmọdụ ahụ rụrụ ọrụ ahụ emeela nke ọma na ọnọdụ ndị a, na m na-atụ anya ịwepụta akụkọ ikpeazụ, nke ga-enye ndụmọdụ maka iji ọrụ ahụike ọgụgụ isi ọ bụla dị n’ime NHS maka ọdịnihu. Nke a ga-emekwa ka ahụmịhe ụmụ nwanyị nwere na-enweta ọrụ ndị a na-emekwa ka ọrụ ndị ọzọ na-adị mfe inweta.
BLG Mind ga-ebipụta nsonaazụ nke nyocha a n'oge na-adịghị anya.